नयाँ भेट: ‘शब्दहरूको शक्ति थाहा पाउन पनि कविता लेखिनु पर्दछ’ - Naya Online
नयाँ भेट: ‘शब्दहरूको शक्ति थाहा पाउन पनि कविता लेखिनु पर्दछ’
शनिबार, कार्तिक १३, २०७८ (October 30th, 2021 at 11:14am ) अन्तर्वार्ता, साहित्य
उमेश अकिञ्चन राई, नेपाली कविताको सदाबहार नाम । राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा कार्यरत छन् । निजामती कर्मचारी भएर नि कलम कर्ममा उत्तिकै सक्रिय रहनु उनको विशेष्ता हो । राई हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । २०३३ साल भदौ २० गते मोरङको बबिया बिर्तामा जन्मेका राईको ‘एक सगर, दुई तारा’ गीत सङ्ग्रह, (२०६४) ‘मोनालिसा र मार्च ८’ कविता सङ्ग्रह, (२०६८) प्रकाशित छन् । राई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता प्रतियोगितामा २०६७ प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने २०६८ सालमा नेपाली साहित्यमा पु¥याएको योगदानका लागि, “रवि साहित्य महोत्सव, पाँचथर सम्मान” समेत प्राप्त गरेका छन् । उनको ‘मोनालिसा र मार्च ८’, ‘सोल्टिनी शहर’, ‘बाराक ओबामा’ लगायतका कविताहरू लोकप्रिय छन् । आजको नयाँ भेटमा उनै कवि उमेश अकिञ्चन राईसँग गरिएको भलाकुसारीको सार अंश ।
दिनचर्या के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
म त एक निजामती कर्मचारी पनि भएकोले, १०–५ कार्यालयमा नै समय दिन्छु । बाँकी समय अध्ययनमा लगाउँछु ।
दसैँ कस्तो भयो, के कस्ता सिर्जनशील काम गर्नु भो ?
अहो ! दसैँको समय बिरामी भएर सुतियो । म स्वास्थ्य, खानपिनमा ख्याल गर्ने नै गर्छु । तर, अचानक रूघाखोकीले सतायो । कोभिड सुरू भएपछि, रूघा लागेको पनि थिएन । कोभिड नै लाग्यो कि भनेर, पिसिआर पनि टेस्ट गरेँ । नेगेटिभ आयो । त्यसै कारण दसैँको विदालाई अपेक्षित सिर्जनात्मक बनाउन सकिन । यद्यपि रञ्जित रेको काठमाडौँ डिलेमा, विश्वभर प्याकुरेलको आत्मकथा चाहि पढेँ ।
पछिल्लो समयमा हजुरको कविता अलि कम देखिन्छ, कविता लेखन अलि पातलिएको हो ?
कविता लेखन आफैँमा फारो विधा हो भन्ने म मान्छु । थोरै तर निरन्तर लेखन मेरो दर्शन हो । यसमा म सन्तुष्ट छु । जहाँसम्म लेखन पातलिएको कुरा छ, त्यस्तो होइन । म त कविता लेखिनै रहेछु । नयाँ सङ्ग्रहमा ताजा कविता रहोस् भनेर केही कविता सार्वजनिक नगरेको हुँ ।
अहिलेको कविता लेखनको मुद्दाहरू के कस्तो लागिरहेको छ ?
मानिस रहेसम्म कविता रहन्छ । कविता रहेसम्म मुद्दा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विगतका सनेट, रोमान्टिसिस्टका कुरा गरौं या पोस्ट स्ट्रकचरका । नेपाली कवितामा त्यस्तै हो । राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा बढि नै उठान गरेको छ । अब समृद्धि र वातावरण तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देख्छु म ।
हामीबाट लेखिनु पर्ने विषयवस्तुहरू सब आइसक्यो या बाँकी छन् जस्तो लाग्छ ?, छ भने के के छन् ?
म्याक्सिम गोर्कीले संसारमा एउटा मात्र कथा छ तर कथन शैली फरक छ भनेर भन्नु भएको छ । हाम्रा साहित्य त्योभन्दा भिन्न छैन । मान्छे, समाज, प्रकृतिभन्दा साहित्य भिन्न हुनै सक्दैन । यी त युगौदेखि अनवरत छन् । हो, हामीले नयाँपन दिने भनेको शिल्पमा हो, प्रस्तुतिमा हो । विषयहरू त पुरानै हुन् तर, कविताको सामथ्र्य हरेक पुराना विषयलाई नयाँ बनाइदिन सक्ने हो ।
कविता किन र केका लागि लेख्ने ?
कविता, ताजापन अनुभूत गर्न लेख्ने हो । कविता, आफूलाई अभिव्यक्त गर्न लेख्ने हो । शब्दहरूको शक्ति थाहा पाउन पनि कविता लेखिनु पर्दछ । यो भन्दा धेरै कारणका लागि कविता लेखिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
तपाईँले कविता लेखेर के पाउनु भो, के गुमाउनु भो ?
पाउन धेरै पाएँ । कविता प्रेमीहरूको माया निरन्तर पाएको छु । साहित्यमा जे पहिचान छ, कविताकै कारणले कमाएको हुँ । आर्थिक कुरा नै गर्ने हो भने वर्षाैं अघि धेरै ठूलो धनराशिको कविता प्रतियोगिता पनि जितेको थिएँ । गुमाएको कुरा केही छैन ।
यदि कविता नलेखेको भए उमेश अकिञ्चन राई कुन सिर्जनशील क्षेत्रमा रमाउथ्यो होला ?
कविता नलेखेको भए सायद आख्यानमा बढि ध्यान दिइन्थ्यो कि । आख्यान पनि काव्यिक किसिमको जस्तो पारिजातको ‘शिरिषको फूल’, हान काङको ‘द भेजिटरिएन’ जस्ता ।
अन्त्यमा, कुनै त्यस्ता नयाँ योजनाहरू ?
नयाँ कविता सङ्ग्रहको तयारीमा छु । तर, प्रकाशनका लागि केही वर्ष लाग्नेछ ।
कवि उमेश अकिन्चन राईको एउटा कविताः
ओच्छयान लगाउने घाम
निदाइरहेछ सधैँ झैँ
यो एक लासको गाउँमा
कालो अक्षरको खेती
चक भैmँ खिइँदै जाने
उमेरको मम्बत्ति सलेदो
भूगोल पढाउने सरको
पृथ्वी गोलो छ
एउटा अनुतरित्त प्रश्न आइरहन्छ
बनेर दुलर्भ तस्बिर
कालो सुँगुरको पाठोलाई
त्यो जुनेली रात
थुन्सेमा बोकेको सेलरोटी
कठुवामा बोकेको जाँड भैmँ
मिठा संयुक्त सपनाहरू
पुरानो भएछ सायद
तिम्रो ठुलो आँखाको
गाजल झैँ गाढा आत्मियता
कर्कलाको पातमा लेखिएजस्तो
मान्छेको निरीह भाग्य
कुनै इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट
झरेका हरिया नोटभन्दा
जिस्काएर गएजस्तो लाग्छ
ढोल र झ्याम्टामा
नाचेको साकेवा सिली
हिडिरहेको उँट सरह
घ्रिसिरहेछु गाउँको धुलो बाटो
नङको नीबले लेख्छु भन्थ्यौ
प्रेमको रक्तिम इतिहास
कुन पराई मिनिक्युरमा
तिम्रा मायाका नेलपोलिसहरू
जब तिमीले टेक्यौ
मेरा सारा सपनाहरू
पुत्ला भएर जले
उडेर गयौ तिमी
सपनाको समुद्र शहर
सुनसान सुनसान हिडिरहेछु
पाइला टेकेर पुगिन्छ
सोल्टिनी शहर ।
उमेश अकिञ्चन राई, नेपाली कविताको सदाबहार नाम । राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा कार्यरत...
नयाँ भेट: ‘एउटा सुन्दर चित्र कोर्न धैर्यतासंगै चित्रप्रति प्रेम पनि हुनुपर्छ’
इन्दु राई याम्फु । पछिल्लो समयका एक अब्बल चित्रकार । प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिले स्वर्गको...
‘लेखनमा भन्दा अलि बढी चित्रकलामा नै आनन्द महसुस गर्छु’ -भीम रसाईली विश्वकर्मा (चित्रकार)
भीम रसाईली विश्वकर्मा एक सुन्दर चित्रकार हुन् । मोरङको केराबारी, बिबिरेमा जन्मेका विश्वकर्मा हाल...
गजलमा अतिवाद गलत र हानिकारक छ -प्रकाश आङ्देम्बे
प्रकाश आङ्देम्बे । नयाँ पुस्ताहरूको ढुकढुकी । आज नेपाली साहित्यलाई धेरै युवापुस्ताहरू प्रेम गर्छन्...
जति नै लेखे पनि ‘परदेश’का विषय र मुद्दाहरु लेख्न बाँकी उती नै रहन्छ -चकेन्द्र राई
धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकामा २०३४ सालमा जन्मेका आख्यानकार हुन् चकेन्द्र राई । वैदेशिक रोजगारीका निम्ति...
‘बन्दकी समयका छोक्राहरू निचोरेर सिर्जनाकर्ममा लगाउनुपर्ने वाध्यता छ’ -गणेश खड्का
गणेश खड्का नेपाली साहित्यका शसक्त हस्ताक्षर हुन् । २०३३ सालमा भोजपुरको तिवारी भञ्ज्याङमा जन्मेका...
पुस्तक वार्ता: ‘पार्सल’का कथाहरू अरपेहरूका जीवन र जिन्दगीको भोगाई हुन्’
२०३४ सालमा धनकुटाको बोधेमा जन्मिएका कथाकार हुन् जीवन देवान गाउँले । झण्डै दुई दशकदेखि...
‘गीत संगीत मानिसको अभिन्न साथी हो’ -कला राई
गायिका कला राईको नेपाली संगीतमा छुट्टै पहिचान छ । लोकआधुनिक गायनमा चर्चा कमाएकी राईले...